Le Congo construit le plus grand barrage hydroélectrique du monde - Afrikhepri Fondation
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2020
ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ်ဆည်ဆောက်လုပ်ရေးအောက်တိုဘာလ 2015, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တိုက်ကြီးအဘို့ဤသည်အလွန်အားတက်စရာသတင်းဗဟိုအာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များအကြားအစည်းအဝေးတစ်ခုအနေဖြင့်အဓိကအားထား။
အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု key ကိုဘဏ္ဍာရေးသရုပ်ဆောင်များကိုအစောပိုင်း 1970 နှစ်များတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောက Grand Inga စီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကွန်ဂိုမြစ်ပေါ်တွင်ရန်း Inga စီမံကိန်းကိုအမည်ရှိပါလိမ့်မည်သည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေလ 18 2013 အပေါ်အဆုံးသတ်သောဤအစည်းအဝေး, ၎င်း၏မြန်နှုန်းအဘို့အမေဇုံပြီးနောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယမြစ် 80 832 m / s ကိုအများဆုံးနှင့်လည်း 2008 ကတည်းက ကမ်ဘာပျေါမှာအနက်ရှိုင်းဆုံးမြစ်ဆင်ခြင်၏။
တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင် "ပထမဦးဆုံးသောကျောက်အောက်တိုဘာလ 2015 ၌ပြောကြားခဲ့သည်။ "
« 40.000 မဂ္ဂါဝပ်တစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တကွ, ဂရန်း Inga စီမံကိန်းကိုနောက်ဆုံးမှာအာဖရိကတိုက်ကြီး၏ထက်ဝက်မှလျှပ်စစ်မီးပေးသွားမှာပါ "ကျနော်တို့ကိုဖတ်နိုင်သလား။
ဒါဟာကမ္ဘာ့ဘဏ် 100.000 မဂ္ဂါဝပ်ခန့်မှန်းအနည်းငယ်လျော့နည်းကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံစုစုပေါင်းတည်ဆဲရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များကို၏ထက်ဝက်ထက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပြီးစီးခဲ့နှင့်အပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာ operating လျှင်, ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းကို 500 သန်းအာဖရိကန်အိမ်ထောင်စုမှစွမ်းအင်ပေးနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။
စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်, Inga III ကို4800 မဂ္ဂါဝပ်တစ်စွမ်းရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကစီစဉ်အစည်းအဝေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ပဲရစ်မှာကျင်းပနှင့်မေလတွင်7အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူညီချက်အောက်ပါအတိုင်းတောင်အာဖရိကနှင့်ကွန်ဂိုတို့အကြားခဲ့ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကအထူးသဖြင့်သတ္တုတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများအတွက်အရေးပါသောဖောက်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျက25004800 မဂ္ဂါဝပ်မဂ္ဂါဝပ် Inga III ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Inga ပြီးသားအသီးသီး 1972 နှင့် 1982 ကတည်းကဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုရေအားလျှပ်စစ်, Inga Inga ငါနှင့် II ကိုရတာဟာ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်, ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်နှင့်အာဖရိကဘဏ်လျှောက်လွှာပလက်ဖောင်း: ဤဆည်သည်လက်ရှိတွင်ကဲ့သို့သောအဓိကကစားသမားများနှင့်အတူအဓိကပြန်လည်ထူထောင်ရေးခံစားနေကြt.
အဆိုပါစည်းရုံးတရုတ်က S: သုံးခုကိုအဓိက consortia 80 ဒေါ်လာဘီလျံခန့်မှန်းကြီးမားသောပရောဂျက်အတွက်အကျိုးအမြတ်များသောစာချုပ်အနိုင်ရလေလံနေကြတယ်inohydro နှင့် Three Gorges ဆည်ကော်ပိုရေးရှင်း; စပိန်တစ်ဦးပေါင်းစပ်အင်အားသုံး Actividades က de Construccion y က Servicios (ACS), Eurofinsa နှင့်ဓနသဟာယ နှင့်တောင်ကိုရီးယား Posco နှင့်ဒေဝူး အဆိုပါ Canadiens နှင့်အတူ allying SNC-Lavalin.
ယနေ့ Three Gorges ဆည်ဆည် တရုတ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ် 22.500 မဂ္ဂါဝပ်တစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 2006 2009 မှအဆင့်ထုတ်လုပ်မှုထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်ကြောင့် 25 ဘီလီယံအထိကုန်ကျမည်ဟုအချို့သတင်းရပ်ကွက်များမဟုတ်ဘဲ 50 ဘီလီယံကိုပြောကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ပိုများသော 1,8 လူဦးရေသန်း 1300 သမိုင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုဒ်များအများအပြားမြို့များနှင့်များစွာသောကျေးရွာများ၏နစ်မြုပ်နှင့်အတူနိုင်ငံတော်ထံမှအကူအညီမပါဘဲအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အသိုင်းအဝိုင်း Inga သောသူတို့တရားမျှတတဲ့လျော်ကြေးရဖို့ 1960 နှစ်ပေါင်းထံမှစစ်တိုက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ဒါဝေးဘာမျှကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ကရေနံသို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်မတူဘဲ, စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွမ်းအင်စဉ်းစားသည်။ တချို့ကသုတေသနရေအားလျှပ်စစ်စနစ်များကနေဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏အကဲဖြတ်အပေါ်သံသယကိုသွန်းလေ၏။ အထူးသဖြင့်အပူပိုင်းဒေသများအတွက်ရေဆည်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားလှုပ်ရှားမှု, (ထို CO20 ထက်ဖန်လုံအိမ်2ကြိမ်နဲ့ဓာတ်ငွေ့ကိုပိုမိုအစွမ်းထက်) မီသိန်းပမာဏလွှတ်ပေးရန်လိမ့်မယ်။
SOURCE မှ: http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/plus-grand-barrage-monde-sera-construit-congo-518508.html
သင်၏အကြံအစည်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်သည်။ Paul Rigel (အသံ)
တို့ဖြစ်သည်, ရှေးဟောင်းပါရှန် (PDF ဖိုင်) ၏မြင့်မြတ်တဲ့စာအုပ်